5-Xariir iyo Muhiimada Ay u Leeyahay Qofka Bani’aadamka | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Khilaafaadka Qoyska (family Problems)|Tukesomalism
Hibo Ciise, April 17, 2016
Saammeynta Isticmaalka Baraha Bulshada
Ilhaan Ciise Maxamed, July 28, 2018
Sheekadii Lamagac Baxday Jacayl God Ma Loogala? – Qeybtii 6aad
Riyadii Jiifka ii Diiday
Maxamuud Axmed Muuse, January 21, 2019
Dheecaanka Kujira Maskaxda iyo Laf-dhabarta Csf-ta
5-Xariir iyo Muhiimada Ay u Leeyahay Qofka Bani’aadamka
Muslimo Cabdullaahi — May 2, 2019
Nolosha waxaa jirra xiriira fara badan oo aan la soo koobi karin, xirriir walbana waxa uu leeyahay micna u gaar ah iyo shuruudo
Mar haddii qofka daciifiyo xiriirka Alle iyo asaga kala dhaxeeyo waxaa daciifo qofka imaankiisa am waxaanba oran karaa qofka marka uu imaankiisa daciif waxaa daciif xiriirka alle kala dhaxeeyey.
loo mara. Marka aan leeyahay waxa aan ka hadlayaa muhiimada uu leeyahay xiriirka, waxa aan raba in aan ka hadlo xirriiro badan oo aan jilcinay oo noogala baahnaa in aan adkayn, taasi awgeed aan ku suganahay dhibaatooyin fara badan. Xirriiradaas qaar ka mid ah ayaan ka hadli donaa waxaana ka mid:
Xiriirka Alle iyo adduunkiisa kala dhaxeeya: Taasi waa mid cad oo uu qof walbo fahmi kara haddana waxaa dhacday in ay dayaceen dadka intooda badan. Halkaas in ay ku wayaan wax yaabo badan aya dhacday oo adduunkooda iyo akhiradooda wax u tari lahaa.
Waa wax isku xeeren inta badan kaliya imaanka ma daciifa ee waxaa daciif in qof ku yaraado Alle ka cabsiga oo uu xaaraan iyo xalaalba isku qaso. Waxyaabaha ka dhasha ma’ahan mid aan ku soo koobi karo halkaan, laakiin mar haddii uu yaraado xiriirka alle iyo adoomadiisa kala dhaxeeyo waa halka uu ka bilowda halaaga umadaas.
Xiriirkaas Alle iyo addoonkiisa kala dhaxeeyo waa wax kaliya addoonka ku badbaado adduun iyo aakhiro. Addoon Alle la leh xiriir fiican, sameeyana wax uu faray kana reebtooma waxa uu ka reebay ma halaagmo ee aan illaalino xiriirka uu Alle nagala dhaxeeyo si nafteen aDduun iyo aakhiro u bad-baado. Dhibatooyinka ugu badan maanta naheesata waxa ay ka dhasheen xiriirkaas aan dayacnay.
Xiriirka qofka iyo naftiisa: Qofka waxa ugu dhow uu in uu adkeeyo muhiim u tahay waa xiriirka naftiis iyo kan Alle. Naftaada waa in aad la leedahay xirriir adag taasi waxay kuu sahlaysaa in ay kuu fududaato xakamayteeda oo aad xumaha ka reebta wanaagana farta.
Haddii uu xiriirkaas liito kuwa kale way adagtay in aad xoojiso. Dadka kaliya waxay moodaan in ay xirriir la leeyihiin dadka kale bes oo way illoobeen tii naftooda ay la lahayeen in ay haggaajiyaan, si uu u haggaago kuba kale waayo kan ayaa ah asal.
Marka aad la leedahay naftaada xirriir fiican waxaa ku fududanaayo in aad naftaada ku kalsoonaato dhiiro- galiso Alle ka cabsigaadana bato, isla goortaas aad tahay mid aysan naftiisa ku hoggaamin wax yaabaha xun-xun oo naftiisa xakameeyo. Mar haddii aad tahay mid naftiis ay ku hoggaamiso xumaha meesha waxaa ka cad in aad tahay mid naftiisa aan la lahayn xirriir fiican oo aan awoodin in uu xakameeyo naftiisa si uu u gaaro hormar adduun iyo mid aakhiro. Waa muhiim xiriirka naftaada aad la leedahay in aad haggaajiso oo aad naftaada ka warqabto si xiriirada kale kuugu hagagaan.
Xiriirka waalidka iyo wiilka: Waa xirriir nolasha u ah udub dhaxaad loona baahanyahay in la illaaliyo. Waa xirriir u ah asal jecel iyo naxariis iyo wajibaad fara badan waana muhiim in ay illaaliyaan wiilka iyo waalidkaba. Waalidka haddii uu wiilkiisa ku soo barbaariyo yaraantiisa in uu la yeesho xirriir fiican wiilka marka uu waynaado wax uu waalidka la yeeshaa xirriir fiican.
Ubadka wanaaji xirriirka aad la leedahay si uu u wanaagsanaado xiriirka uu kula leeyahay. Barbaariyaha waa macalinka koowaad ee ubadka bara xiriirada dunida oo idil. Ubadka wax uu uga daydaa waalidka xirriirka kala dhaxeeyo Alle iyo dadka kale.
Haddi aad waalidkaada la leedahay xiriir wanaagsan wiilkaada waxa uu kula yeeshaa xiriir fiican ee adiga bar in aad wanaajiso xiriirada. Wiilkana waajib ayaa kasaaran in uu haggaajiyo xiriirada kale dhaxeeyo waalidkiisa mar walbo. Wiilka mar haddii ka qaldamo xiiirkaas xiirada kale ayaa qalqal galo oo ay adagtahay in ay haggaagan sababtoo ah caasi waalidayn waxbo uma haggaagaan ee aan ku dadaal adkeenta xiriirka waalidka nagala dhaxeeyo si uu Eebo wax walbo noogu fudadeeyo.
Xiriirka lamaanaha is qaba: Waa labbo uu Alle calaf isugu daray loona baahanyahay in ay ka faa’ideystaan nimcadaas oo in ay yeshaaan xiriir wanaagsan. Guurka waa calaf haddaan xiriirkaan haggaajintiisa waxa ay ka bilaawataa guurka ka hor, sababtoo ah waxaa la rabo in aad xulato lamaane wanaagsan kuna wanaagsan diinta Alle lehna dhaqan wanagsan iyo reer wanaagsa. Diinteenna waxyaabo badan oo guur lagu xusho ayey noo sheektay mida diin haba ahaato mid aad loo adkeeyo.
Waa muhiim in aad lamaano wanaagsan raadisaa si uu u tooso xiriirka guurkaas.
Guriga inta aadan dhisan ka hor haddaad doorato tiirarka adag waxaa meesha kaaga soo baxo guri adag aan la dumin Karin oo ay adagtahay in ay dabayluhu ka adkadaan. Waa sidaas oo kale marka aad doorto lamaano wanaagsan way adagtahay in ay dumiyaan gurigaas daruufaha dunida ka jira. Guurar badan ayaa jira xiiraradooday ay daciif noqotay oo lagu kala tagay qaarna aan jirin xirriir fiican oo ay tahayba ilmaha aan isla korsano taasi waa wax aad looga xumaado run ahaantii.
Lamaanaha in ay wanaajiyaan xirriirkooda waxaa ka dhalata faa’idooyin aad iyo aad u fara badan oo aan halkaan ku soo koobi karin. Laakiin waa muhiim in ay wanaajiyaan xiriirkooda si uu gurigooda, guurkooda iyo ubadkoodaba u haggaagaan, inay wanaajiyaan xiriirkooda ayey ku xerentahay haddi uu xumaado xiriirkooda mustaqbalka reerkaas waa mid qalqal ku jira ee aan wanaajiya xiriirada nagala dhaxeeyo lamaanayasheena.
Xiriirka shacabka iyo dowlada: Waa xiriir asal u ah hormarka dalka. In shacabka iyo dowlada kale dhaxayso xirriir fiican waxa ay fudadaysaa in ay dhexmarto wada shaqayn, waana talaabad kaliya hormar lagu gaari karo. Waxa inoo sabab hormarkaan liita waa xiriirka shacabka iyo dowlada kala dhaxeeyo oo aad iyo aad u liita amaba jira xiriir ka dhaxeeyo dowlada iyo shacabka ayaan oran karaa sababto ah maysan dhaceen dhibatooyin badan oo hada dhaca.
Xirriirkaas markii la wayey waxaa meesha ka baxday kalsoonida iyo is aaminaadi dhex mari laheed shacabka iyo dowlada, xaalada waxay noqotay mid faraha kasii baxday maalinbo maalinta kasii dambayso. Illaa uu kasoo laabto xiriirkaas si ay u dhacdo wada shaqay saan iyo si kasi liidataan ahaan doonaa.
Dowladkastoo hormarta waxaa hormariya dadkeeda, dalkasto waxa hormariya dowladeeda, waa wax isku xeran kuna xeran xiriirka ka dhaxee dowlada iyo shacab in uu haggaago.
Waxaan maqlaa mar walbo dowlada iyo dowladihii shisheeye xiriirkooda wuu xumaaday ama dowlada iyo dowladihii dariska ahaa xiriirkooda waa liitaa. Laakiin ma dhicin in aan maqlo xagguu marayaa xaalka dowladdaan iyo shacabkeeda oo xiriirkooda intee buu la ekyahay. Arinta salka ka qasan ka toosi mayso ee arrinka meesha hoosa halaga hagaajiyo. Midna aan ogaano nin kasoo bixi waayey masuuliyada naftiisa oo aan naftiisa xiriir fiican la lahay dowladiisa iyo dadka kale way adagtahy in uu la lahaado xirriir wanaagsan.
Tags: 5-Xariir iyo Muhiimada Ay u Leeyahay Qofka Bani’aadamka
Next post Maxaa Sababa Dhimashada Hooyada Xiliga Uurka Iyo Dhalmada?
Previous post Haddaba Kaallay Aan Isla Aragnee Caalamadaha Cudurka Faaliga Lagu Garto
About the Author Muslimo Cabdullaahi
Waa qoraa ka tirsan Tuke Somalism. Qoraaga ayaa taqaqus u leh cilmiga xoolaha iyo maamulida ganacsiga. Waxay wax ka qortaa arrimaha bulshada, cilmiga xoolaha iyo taariikhda umadaha adduunka iyo waliba sidoo kale maamulka ganacsiga.